कर्णाली सरकार र नेताहरु अस्पतालमा तिम्रो उपस्थिति तुरुन्त चाहियो ! – HostKhabar ::
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भइरहेकाले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग चाहिएको बताएको छ ।
शुक्रबार जेनेभामा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम गेहब्रेयससले नेपाल लगायत एशियाली देशहरुमा तिब्र रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथामबारे धारणा राख्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले मात्रै नेपालमा महामारीको अड्कलबाजि गरिएको होइन ।
यतिखेर नेपालमा डरलाग्दो रुपमा कोरोनाको त्रास फैलिएको छ भने सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा लापरवाही गरिरहेको आवाज सर्वत्र सुनिएको छ । कोरोनाको दोश्रो लहर बढि जोखिमयुक्त भएको समाचार आइरहदा र अस्पतालमा उपचार गराउन गएका बिरामीले अक्सिजन नै नपाएर फिर्ता हुनुपर्ने अवस्थामा जनतामा सरकार प्रति आक्रोश फैलिएको छ । कर्णालीमा शुक्रबार मात्रै ४ सय १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको सरकारी आँकडाले नै पुष्टि गरेको छ । विशेष गरी कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा कोरोना फैलिने दर उच्च छ । जनसंख्या चापले पनि यो दर बढि देखिएको छ । तर कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराउन गएका र अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका बिरामीले अक्सिजन पाउन नसकेर फिर्ता हुनु परेको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा रहेका २ वटा अक्सिजन प्लान्टले यहाको भार थेग्न नसकेपछि शुक्रबार यहाँका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी बिरामी भर्ना गर्न नसकिने जनाएका छन् । अस्पताललाई दैनिक ३ सय बढि सिलिण्डर आवश्यक रहेकोमा यहाँ मात्रै १ सयका दरले उत्पादन भएको पाइएको छ । यस्तो बिषम परिस्थितीमा पनि कर्णाली सरकार मूकदर्शक हुनु कदापी सुहाउँदैन ।
हामी जनताले एकातिर संयमित भएर अहिले डाक्टरहरुको सम्पर्कका आधारमा घरमैं उपचार गराउनु जरुरी छ भने अस्पतालले दिएका सम्पर्कहरुमा बारम्बार सम्पर्क गरि परामर्श लिनु आवश्यक छ । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल लगायत केही मिडियामा आएका त्रास बढाउने खालका समाचारमा ध्यान नदिई स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सल्लाह र परामर्शमा होम आइशोलेसनमा उपचार गराउनु पर्ने छ । यदि अस्पताल लैजानु पर्ने अवस्था आएमा डाक्टरको सल्लाहमा लैजानु पर्दछ । उपचारका लागि सामाजिक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, डाक्टर लगायतको सहयोग मागौं । आत्मबल बढाऔं, पौष्टिक आहार पर्याप्त खाऔं र नआत्तिऔं ।
यस्तो अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने र अक्सिजनको व्यवस्था नगर्ने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? १२ महिना नै कुर्सी खेल र मोहमा रुमल्लिएको अनि अहिले पनि थपिएका मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहणको ह्याङ्ग ओभरमा रन्थनिएको सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनु पर्दैन? राजधानी सुर्खेतको अवस्था त यस्तो छ भने कर्णालीका दुरदराजका जनतको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला? कति बिरामी घरमैं छट्पटाइरहेका होलान?
काँग्रेसको विश्वास मत बटुलेर सरकार जोगाएको कर्णाली सरकार र यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सुर्खेतबाटै हाल विद्यमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का, कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरु, पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमाले कर्णालीका संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, पूर्व मन्त्री हृदयराम थानी, सम्पूर्ण प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार समेतले जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी लिनुपर्दछ भने यथासिघ्र अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्यथा चोट(घाउ) सहेर रुख बिरुवा पनि पलाउँछ, भोली त्यसको जवाफ जनताले दिने नै छन् ।